DHAGEYSO:Raila Odinga oo sheegay inay ogolaan doonaan go’aanka maxkamadda ee BBI | Star FM
Home Wararka Kenya DHAGEYSO:Raila Odinga oo sheegay inay ogolaan doonaan go’aanka maxkamadda ee BBI
DHAGEYSO:Raila Odinga oo sheegay inay ogolaan doonaan go’aanka maxkamadda ee BBI
Madaxa xisbiga ODM Raila Odinga oo maanta wareysi gaar ah siiyay idaacadda Radio Citizen ayaa sheegay inuu rajeynayo in maxkamadda racfaanka ay go’aan cadaalad ku saleysan ka soo saari doonto qorshaha sharci beddelka ee BBI.
Waxaa uu xusay in maadaama dalka ay ka jiryo dimuqraadiyad ay mucaarad ahaan aqbali doonaan go’aanka maxkamadda xita hadii aynan ku qanacsanayn.
Mr. Odinga ayaa tusaale u soo qaatay go’aano horay ay maxkamaduhu u soo saareen oo ka dhan ahaa mucaaradka.
Madaxda heshiisay ayaa dhankooda ballanqaaday inay ku dadaali doonaan inuusan mar dambe khilaaf soo kala dhexgelin.
Previous articleKenya oo heshay in ka badan 180 kun oo ah daawooyinka tallaalka COVID19
Next articleDHAGEYSO:7 qof oo ku dhintay shilal ka dhacay Nakuru